Bishop weKaturike Anonangwa muSri Lanka Kubhuroka
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Waya Nhau Services » Bishop weKaturike Anonangwa muSri Lanka Kubhuroka
bhishopi wechristian noel emmanu
Bhishopi Christian Noel Emmanuel
"Nhengo dzeParamende dzinoverengeka uye dzaimbove dzeTamil, vatapi venhau veTamil pamwe nevatungamiriri venharaunda vakanangwawo"
Chimwe chezve kukwidzwa kwakaitwa neWatch for Justice ndechekuendesa Sri Lanka kuInternational Criminal Court (ICC) yeWar Crimes, Crimes Against Humanity & Genocide Committed Against Tamil People NaSri Lankan state ”
Mukuchinja kunoshamisa kwezviitiko, Bhishopi weKaturike muSri Lanka akatariswa sedanho rekurwisa kufamba kweTamil kururamisira richienderera mberi. Trincomalee Bishop Christian Noel Emanuel akashumirwa nemitemo yekugara nemapurisa kubva mukutora chikamu cheWatch for Justice cheTamil.
Kufamba uku kururamisira kwakarongwa neNorth neEast Civil Society Organisations kuratidzira kushungurudzwa kwakaitwa maTamil uye kuratidza kukwiriridzwa pamwe chete kweTamil kuUN High-Commissioner for Human Rights uye nenhengo dzeUN Human Rights Council. Chikumbiro ichi chaisanganisira chikumbiro chekuendesa Sri Lanka kuInternational Criminal Court (ICC) yeWar Crimes, Crimes Against Humanity uye Genocide yakaitirwa vanhu veTamil neSri Lankan State.
Akawanda azvino & aimbove nhengo yeParamende, vatori venhau veTamil uye vatungamiriri vemasangano ehurumende vakapihwawo mirairo yekugara yekuvatadzisa kufukidza kana kutora chikamu mukufamba uku
Kufamba uku kwakarongerwa kutanga musi wa3 Kukadzi kubva kuPothuvil mudunhu reEastern uye kuchapera muPolihandy mudunhu reKumaodzanyemba.
Iyo Kufamba ndeyekusimbisa zvinotevera nyaya:
1) Kuenderera mberi kwekutora ivhu munzvimbo dzeTamil nekushandura nzvimbo dzechiTamil nedzenhoroondo munzvimbo dzeSinhalese nekumisikidza tembere dzeBuddhist mushure mekuparadza tembere dzechiHindu. Kubva parizvino mazana maviri ematemberi echiHindu akaitwa.
2) VaMuslim vakafa nekuda kwe COVID vanopiswa vachipesana nezvido zvemhuri uye zvinopesana nedzidziso dzeIslam.
3) MaTamil munzvimbo dzakakwirira anga achikurudzira kubhadharwa kwemazana zana rupees, asi Hurumende haisi kupindura zvavanoda.
4) Kubvira pakapera hondo makore gumi apfuura, kumanikidzwa kwenzvimbo dzeTamil kuri kuenderera mberi uye kuzivikanwa kweTamil kwakaparadzwa nechinangwa chekuchinja huwandu hwevanhu uchifarira Sinhalese, uchishandisa madhipatimendi ehurumende akasiyana, kunyanya madhipatimendi ezvekuchera matongo. Zvakare, misha inotsigirwa neHurumende yeSinhalese iri kuenderera.
5) Varidzi vemombe veTamil vakatarisana nematambudziko mazhinji, uko kwavo kwekutora nzvimbo kuri kugara vaSinhalese uye mombe dzavo dzakaurawa.
6) PTA yakashandiswa kusunga vechidiki vechiTamil pasina mhosva kana kutongwa kweanopfuura makore makumi mana yava kushandiswa kumaMuslim.
7) Vasungwa veTamil vezvematongerwo enyika vakasungwa kwemakore vasina kutongwa. Hurumende yakaregerera Sinhalese nguva dzose, asi hapana mumwe wevasungwa veTamil vezvematongerwo enyika akaregererwa.
8) Mhuri dzevakamanikidzwa vakatsakatika vanga vachiratidzira kuti vawane vadikani vavo, asi Hurumende iri kuramba kuvapa mhinduro.
9) maTamil akarambidzwa Kodzero Yekurangarira yavo vakafa vakafa, sezvakaratidzirwa nekuramba zviyeuchidzo zviitiko, kuparadzwa kwemakuva evakafa, uye kuputswa kwezviyeuchidzo.
10) Hurumende yakanangana nevatori venhau veTamil vanofukidza kushungurudzwa uku uye nevamiriri veTamil Civil Society vanopikisa kushungurudzwa uku.
11) Kuzadzikisa Chibvumirano cheTamil chakabatana kuUN High Commissioner weHuman Rights uye kuUN Human Rights Council Nyika dzeNhengo.
Kuti uwane ruzivo bata: